Igumbi lesi-7, igumbi elinebhedi ephindwe kabini kunye nokuzikhethela
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguGraham
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uGraham iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Kwilali encinci kwi-Kent Downs AONB, iGranary ibonelela ngeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka yasemaphandleni. Iindlela zelizwe elincinci kunye neendlela zokuhamba ngeenyawo kwihlathi, idlelo kunye neefama, indawo enhle yokuhlola ngeenyawo okanye ngebhayisekile. Elalini sinayo iCheckers Inn, indawo yentselo enkulu yokutya neziselo kunye nembasa yeebhula kunye needelicatessen. Indawo yokuhlala ikumagumbi abucala een-suite, igumbi lokuphumla / igumbi lokutyela kunye nekhitshi elixhotyiswe kakuhle elinobushushu obuphantsi kunye nesitshisi seenkuni ukwenza ukuhlala kwakho kushushu kwaye kupholile.
Sihlala kwindawo yokuzola emaphandleni anegadi yeziqhamo, amahlathi, amadlelo kunye namasimi alimekayo konke okungaphakathi kokugityiselwa kwamatye. Zininzi iindlela zeenyawo kunye neendlela ezidlulayo ezineembono ezigqwesileyo kunye neepubs ezinkulu zasekhaya. IGranary ilungele izibini, abantu abahamba bodwa, abahambi ngezoshishino, abakhweli beebhayisikile nabahambi ngeenyawo.
Siyakuthanda ukudibana nokubulisa iindwendwe zethu. Siya kukuhlonipha ukuba bucala kwakho, kodwa siya kukwazi ukunika iingcebiso ngeendawo onokundwendwela kuzo, ukutya kwaye sineendlela ezininzi zokuhamba kunye neebhayisekile ezijikeleze indawo esikuvelisele iimephu ukuba uzisebenzise. U-Graham wazalelwa elalini kwaye uthanda ukukuxelela kancinane ngobomi belali kunye nembali yayo.
Siyakuthanda ukudibana nokubulisa iindwendwe zethu. Siya kukuhlonipha ukuba bucala kwakho, kodwa siya kukwazi ukunika iingcebiso ngeendawo onokundwendwela kuzo, ukutya kwaye sineen…